जनयुद्ध दिवसका दिन सबै माओवादी घटक एकै ठाउँमा, जनयुद्धको स्मरण गर्दै भए भावुक - जनदिशा
Featured national samachar tippadi
जनयुद्ध दिवसका दिन सबै माओवादी घटक एकै ठाउँमा, जनयुद्धको स्मरण गर्दै भए भावुक
Sahas February 14, 2020	No Comments
काठमाडौँ । तत्कालीन नेकपा (माओवादी)को नेतृत्वमा भएको दशवर्षे जनयुद्धलाई नेपालको कम्युनिष्ट आन्दोलनमा एउटा महत्वपूर्ण परिघटनाका रुपमा लिने गरिन्छ । नेपाली समाजको आमूल परिवर्तन गर्ने उद्धघोसका साथ् तत्कालीन माओवादीले २०५२ साल फागुन १ गते जनयुद्ध शुरु भएको घोषण गरेको थियो । त्यसैको सम्झनामा फागुन १ गतेलाई माओवादीहरुले जनयुद्ध दिवसका रुपमा मनाउने गरेका छन् ।
माओवादीहरुले विशेष रुपमा मनाउदै आएको जनयुद्ध दिवस पछिल्लो समय भने औपचारिकतामा मात्रै सिमित हुने गरेको छ । टुटफुट र विभाजनका कारण फरक-फरक अस्तित्वमा रहेका माओवादी पार्टीहरुले जनयुद्ध दिवस पनि फरक-फरक रुपमै मनाउँदै आएका छन् । विभाजनपछिका वर्षहरुमा केवल औपचारिकता पुरा गर्नेगरी अलग-अलग रुपमा जनयुद्ध दिवस मनाउँदै आएका उनीहरुले यसपटकको (२५औं) जनयुद्ध दिवस भने एकैसाथ मनाएका छन् । बिहीबार जनयुद्ध स्मरण समितिले राजधानीमा आयोजना गरेको कार्यक्रमले सबै माओवादी घटकका केहि नेता-कार्यकर्तालाई एकै ठाउँमा भेला गरेको हो ।
जनयुद्धको नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी) र तिनका नेताहरु अहिले फरक-फरक पार्टीमा छन् । जनयुद्धबाट उदाएको कुनैबेलाको शक्तिशालि माओवादी पार्टी पटक-पटकको फुट र बिभाजनको शिकार बन्दा अहिले स-साना समूहमा सिमित हुन् पुगेको छ । संसार परिवर्तन गर्न उद्धेश्यसहित युद्धमा होमिएको पार्टी आफैमा विभाजित हुँदा जनयुद्धलाई हेर्ने उनीहरुको दृष्टिकोणमा समेत एकरुपता नभएको माओवादी कार्यकर्ताहरुकै आरोप छ । बिहीबारको कार्यक्रमका सहभागीहरुले पनि तत्कालीन माओवादीका शीर्ष नेताहरुकै कारण पार्टी विभाजन हुन् पुगेको र जनयुद्धको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठाउन थालिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे ।
शान्ति प्रक्रियाको प्रारम्भका केही वर्षयता एकीकृत र शक्तिशाली रहेको माओवादी पार्टी पछिल्लो ७/८ वर्षमा ४/५ समूहमा विभाजित भयो । विभाजन र एकताको अनेकौ शृंखला पार गर्दै आजको दिनसम्म आइपुग्दा अहिले औपचारिक रुपमा माओवादी नामको पार्टी अस्तित्वमा समेत छैन । प्रचण्ड-बादलले नेतृत्व गरेको तत्कालीन नेकपा (माओवादी केन्द्र) एमालेसंगको एकतापश्चता अहिले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नाममा रुपान्तरण भएको छ । डा. बाबुराम भट्टराई नयाँ शक्ति हुँदै समाजवादी पार्टीमा पुगेका छन् भने नेत्रविक्रम चन्द विप्लव विद्रोही नेकपाको महासचिव छन् । मोहन वैध किरण नेकपा (क्रान्तिकारी माओवादी)को नेतृत्वमा रहेका छन् ।
तर, बिहीबार पार्टीले संस्थागत रुपमा आ-आफ्नै ढंगले कार्यक्रम मनाइरहँदा उनीहरुले भने दलीय दयाराभन्दा माथि उठेर एकै ठाउँमा जनयुद्ध दिवस मनाएका हुन् । जनयुद्धको सुरुआत, तत्कालीन माओवादीले जनयुद्ध सुरु गर्दा गरेका प्रतिवद्धता, प्राप्त उपलब्धि, माओवादी पार्टीको विभाजन र अहिलेको अवस्थाका बारेमा उनीहरुले दिल खोलेर छलफल गरे । कार्यक्रममा उलेख्य रुपमा उपस्थित भएका विभिन्न माओवादी घटकका नेता-कार्यकर्ताहरुले जनयुद्धको ऐतिहासिकता र यसको महत्वका बारेमा अन्तरंग छलफल गरे । उनीहरुले जनयुद्धका कठिन र कहालीलाग्दा क्षणहरु, युद्धमोर्चाका अनुभव, युद्धमोर्चामा सहकर्मी गुमाउनु पर्दाको पिडा, लडाई जित्दाका खुसिलगायत मनका भावना आपसमा साटासाट गर्दै भावुक पनि भए ।
जनयुद्धको तयारीका बेला तत्कालीन माओवादीका १९ जना केन्द्रीय सदस्यमध्येका एक नारायण प्रसाद शर्माले पार्टीगत दायरा भन्दा माथि उठेर जनयुद्धलाई मान्ने शक्तिहरु एकै ठाउँमा भेला भै जनयुद्धको स्मरण गरिएको बताए । हाल सत्तारुढ नेकपाका स्थायी समिति सदस्यसमेत रहेका उनले जनदिशासंग कुरा गर्दै भने, ‘जनयुद्ध नेपाली धर्तिमा अहिलेसम्म भएकामध्ये सबैभन्दा ठूलो परिवर्तनकारी आन्दोलन हो, जनयुद्धका गौरवपूर्ण दिनहरुको स्मरण गर्न विगतमासंगै युद्ध लडेकाहरु एकजुट भएका हौँ ।’
तर, पार्टीगत रुपमा भने सबै घटकहरुले आ-आफ्नै हिसाबले जनयुद्ध दिवस मनाए । जनयुद्धको सुप्रिम कमान्डर रहेका प्रचण्ड हाल सत्तारुढ नेकपाका अध्यक्ष छन् । उनीसहित बादललगायतको ठूलो समूह अहिले नेकपामा छ । नेकपाले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय धुम्बाराहीमा जनआन्दोलन तथा जनयुद्धका शहिदहरुको स्मृतिमा श्रद्धाञ्जली सभा आयोजना गरेको थियो । अन्य समूहरुले पनि छुट्टाछुट्टै कार्यक्रम गरि जनयुद्ध दिवस मनाए ।
नेकपाका नेता शुरेश आले मगरले भने धुम्बाराहीको कार्यक्रमलाई जनयुद्ध दिवस मान्न नसकिने तर्क गरे । पार्टीको कार्यक्रममा नगई जनयुद्ध स्मरण समितिले आयोजना गरेको कार्यक्रममा पुगेका मगरले भने, ‘पार्टी कार्यालयको कार्यक्रम जनयुद्धलाई गौरव गर्ने र जनयुद्धलाई स्मरण गर्ने खालको होइन, जनआन्दोलन र जनयुद्धका सहिदहरुको स्मृतिसभा हो, यद्यपी त्यो सकारात्मक नै छ । मेरो प्राथमिकतामा त्यता भन्दा यता पर्यो त्यसैले यतै आए ।’
जनयुद्धबाट स्थापित भएको माओवादी पार्टी छिन्नभिन्न अवस्थामा पुगेका बेला कार्यकर्ता तहबाटै भएपनि एकै मन्चमा बसेर जनयुद्धको स्मरण गर्नुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने नेकपाकै अर्का नेता झक्कुप्रसाद सुवेदीले बताए । ‘अहिले जो जहाँ भए पनि जनयुद्ध एउटा गौरवपूर्ण इतिहास हो, यो आन्दोलनमा सहभागी हुने एउटा सिपाहीको हैसियतले यसप्रति गौरव गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छु, उनले भने, ‘हामी जहाँ भएपनि कमसेकम जनयुद्ध जिन्दावाद भन्ने कुरामा चै सहमत छौ, त्यसैले अन्य कार्यक्रमलाई भन्दा यो कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएर आएको हुँ ।’
नयाँ शक्तिबाट भर्खरै नेकपामा प्रवेश गरेका देवेन्द्र पराजुलीले पनि केन्द्रीय कार्यालयको कार्यक्रम भन्दा यो कार्यक्रम आफ्ना लागि भावनात्मक रुपले निकट रहेको बताए । उनले विभाजित भएर फरक-फरक कित्तामा पुगेका जनयुद्धका योद्धाहरु एकै ठाउँमा बसेर जनयुद्धको स्मरण गर्न पाउँदा आफूलाई खुसि लागेको बताए । जनयुद्ध दिवसलाई सबैले स्वीकार गर्नुपर्ने बताउँदै उनले यसबारे पार्टीमा कुरा उठाउनेसमेत बताए ।
जनयुद्धको स्मरण गर्दै अर्का माओवादी नेता नरेन्द्रजंग पिटरले जनयुद्धको कठिन परिस्थितिमा पनि दृढ इच्छाशक्ति र आन्दोलनप्रतिको निष्ठाका कारण उत्साह हुने गरेको बताए । जनयुद्धको नेतृत्व गर्नेहरुले नै गलत दिशा लिंदा अहिलेको अवस्था भोग्नुपरेको भन्दै उनले सबैले खबरदारी गर्नुपर्ने बताए ।
केन्द्रीय कार्यालयको कार्यक्रम छाडेर पुगेका नेकपाकै अर्का नेता लक्ष्मण पन्तले पनि जनयुद्धलाई मनैदेखि आत्मसात गर्नेहरु एकै ठाउँमा जम्मा हुनु सकारात्मक थालनी भएको बताए । पार्टीको कार्यक्रममा नगएर किन यता आउनु भयो त भन्ने हाम्रो प्रश्नमा उनले भने, ‘जनयुद्ध दिवस औपचारिकता पुरा गर्नका लागि मात्र मनाउने होइन, मनैदेखि आत्मसात गर्ने कुरा हो, त्यसैले मेरो मन यतै तानियो ।’
विप्लव नेतृत्वका नेकपाका नेता एकराज भण्डारीले पनि जनयुद्धबाट आएका नेता-कार्यकर्ता एकै ठाउँमा भेला भएर जनयुद्धको स्मरण गर्ने वातावरण बन्नुलाई उपलब्धि कै रुपमा लिनुपर्ने बताए ।
कार्यक्रममा उपस्थित भएकी जनयुद्धका शहीद कृष्णसेन इच्छुककी श्रीमती प्राध्यापक डा. तक्मा केसीले पनि जनयुद्धलाई मनैदेखि आत्मसात गर्नेहरु एकै ठाउमा बसेर जनयुद्ध दिवस मनाउनु प्रसंसनिय कार्य भएको बताईन् । जनयुद्धमा त्याग, तपस्या र बलिदानीको थुप्रै कीर्तिमानी बनेको स्मरण गर्दै उनले माओवादी पार्टी विभाजित हुँदा हजारौ शहीद, बेपता र घाइतेहरुको सपनामाथि कुठाराघात भएको बताइन् ।
२०५२ साल फागुन १ गते तत्कालीन माओवादीले एकैसाथ तीनवटा प्रहरी चौकीमा आक्रमण गरेर युद्धको घोषणा गरेको थियो । यो दिनलाई माओवादीहरुले विशेष दिनका रुपमा लिने गरेका छन् । दीर्घकालीन जनयुद्धको बाटोबाट नेपालको संसदीय व्यवस्थासहितको राजतन्त्रलाई हटाएर जनताको जनवादी व्यवस्था ल्याउने जनयुद्धको मुख्य लक्ष्य थियो । नेपालमा गणतन्त्र आएपनि माओवादीले त्यतिबेला भनेको जनवादी व्यवस्था आएको छैन ।
जनयुद्धका बेला गरिएका प्रतिवद्धता पुरा नभएको सबै माओवादी नेता-कार्यकर्ता स्वीकार गर्ने गरेका छन् । त्यतिबेला माओवादीले पूर्णरुपमा जनताको सत्ता नआउदासम्म जनयुद्ध अन्त्य नगर्ने घोषणा गरेको थियो । कार्यक्रममा उपस्थित सत्तारुढ नेकपाका नेता-कार्यकर्तादेखि विद्रोही विप्लव नेकपाका नेता-कार्यकर्तासम्मले पनि जनयुद्धको लक्ष्य पुरा नभएको र क्रान्तिका बाँकी कार्यभार पुरा गर्न थप संघर्षको आवश्यकता रहेकोमा जोड दिएका थिए ।
Previous Previous post: गिरिजाप्रसाद कोइरालाले अझै ठूला आक्रमण गरिदिनुपर्‍यो भन्थे : प्रचण्ड
Next Next post: सोभियत सेनाले यसरी गरेको थियो नाजीहरुबाट हंगेरी मुक्त: रुसी सरकारद्वारा सबै डकुमेन्टहरु खुला